किन मनाइन्छ राष्ट्रिय झण्डा दिवस ? (फाेटाेफिचर) – BikashNews
२०७७ पुष १ गते १२:४८ विकासन्युज
काठमाडाैं । आज पुष १ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी तेस्रो राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको छ । राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले माइतीघर मण्डलामा कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाएको हो ।
प्रतिष्ठानले २०७५ पुष १ गते देखि यो दिवस मनाउँदै आएको छ । २०१९ पुष एक गतेको दिन नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई संयुक्त राष्ट्र संघमा अंगिकृत गरिएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रतिष्ठानले २०७५ पुष १ गते देखि दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय झण्डाको महत्व नै नबुझेर प्रयोग गरिनु ठिक नभएको पनि उनले बताए । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान’ मूल नारा सहति दिवस मनाइएको हो । प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष राष्ट्रिय झण्डा दिवस, राष्ट्रिय पोशाक दिवस र राष्ट्रिय टोपी दिवस समेत मनाउँदै आएको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले संयम्ता अपनाउनु पर्छ: देवकुमार ढकाल
नयाँ भेरियन्टसँग नेपाललाई सर्तकता अपनाउन डब्लूएचओको सुझाव
मेडिसिटीका डा. जोशी उत्कृष्ट युवा न्युरोसर्जन अर्वाडबाट सम्मानित
यस वर्ष टेलिकमद्वारा ८ अति दुर्गम स्थानमा टुजी र फोरजी सेवा विस्तार
अर्थमन्त्रीसँग गुनासो गर्ने सेयर लगानीकर्ता गभर्नरसँगै सन्तुष्ट
लघुवित्तलाई नयाँ व्यवस्थाः सेवा शुल्क लिन नपाउनेदेखि सेयर किन्न रोकसम्म